What is the usage of Php cURL? - MYSTERY ZILLION
What is the usage of Php cURL?
April 2014 in PHP
cURL ကို PHP မှာဘယ်လိုအသုံး၀င်လဲသိချင်ပါတယ် ။ တခြားဆိုဒ်တွေမှာ data transfer လုပ်တာလို့ရေးထားပါတယ် ။
April 2014 Administrators
CURL ဆိုတာက page request လုပ်တဲ့ အနေနဲ့ အသုံးချပါတယ်။ ဥပမာ။။ website တစ်ခုက data ကို ယူချင်တယ်ကို ယူချင်တယ်ဆိုရင်
$return = curl_exec ($ch);
အဲမှာ return ထဲမှာ ကိုယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ URL က response တွေပါလာပါမယ်။ တကယ်လို့ website သာ ဖြစ်ရင် HTML text တွေ ရပါမယ်။ အဲဒီ HTML text ထဲက ကိုယ် analyst လုပ်ချင်တာတွေ သုံးလို့ရတယ်။
curl နဲ့ GET , POST method တွေ သုံးလို့ရပါတယ်။